Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu safar ku tago magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu safar ku tago magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Ma jiro war rasmi ah oo la xidhiidha socdaalka madaxweyne Biixi, laakiin warar uu wargeyska Geeska Afrika helay ayaa sheegay in Madaxweyne Biixi uu Addis Ababa ku tagi doono martiqaad uu ka helay raysalwasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed.
Madaxweyne Biixi ayaa wuxuu Addis Ababa markii u horaysay kula kulmi doonaa Raysalwasaaraha Itoobiya, oo la filayo inay ka wada hadlaan xidhiidhka Somaliland iyo Itoobiya. Madaxweyne Biixi ayaa hore u tagay Addis Ababa markii la doortay, waxaanu halkaas kula soo kulmay raysalwasaarihii hore ee is casilay, waxaanu kulanka haddu noqonayaa kii u horeeyay ee dhex mara madaxda Somaliland iyo Raysalwasaaraha cusub ee Itoobiya.
Previous Xaflad soo dhoweeyn ah oo galbeedka London loogu sameeyey Garaadka guud ee Dhulbahante
Next MADAXWEYNAHA PUNTLAND AYAA BRUSSELS KULAN KULA QAATAY JAALIYADDA PUNTLAND EE KU NOOL BELGIUM